M/weyne Shariif oo sheegay in waxqabadka ugu weyn ee dawlada federaalka ah ee 2009 uu ahaa furitaanka idaacada Muqdisho. – Radio Daljir
Muqdisho, Jan 17 – M/weynaha dawlada federaalka ah ee Somaliya Sh. Shariif Sh. Axmed oo ka hadlay waxqabadka dawlada federaalka ah ee Somaliya 12-kii bilood ee uu ahaa M/weynaha dalka, ayaa sheegay in dhismaha hay’adaha dawliga ah sida kuwa amnigu ay ugu muhiimsanaayeen waxqabadka lagu faani karo ee dawladiisu ku guulaysatay.
Furitaanka idaacada Muqdisho ee codka dawlada ayaa uu sheegay in ay tahay waxqabad ay dawladiisu ku faani karto.
Dawlada federaalka ha ee Somaliya ma laha hay’ado amni oo la taaban karo ama ciidan tayo leh oo sugi kara amniga goobaha ay madaxda dawladu ku sugan yihiin.
Dawlada ayaa ka tilisa dhawr goobood oo ku yaal magaalada Muqdisho oo laga magacaabi karo Villa Somaliya, madaarka, dekedda Muqdisho & meelo cayiman, iyagana ay ilaalo xoogan ka hayaan ciidanka AMISOM ee ku sugan Muqdisho.
Mar la weydiiyey M/weyne Shariif inta xaafadood ee magaalada Muqdisho ee dawladu ay ka taliso ayaa uu sheegay in ay dawladu xukunto xaafado badan, balse mar la weydiiyey in uu magacaabo tirada xaafadaha, ayaa uu ku jawaabay, in uusan aqoon.
Xalka Somaliya ayaa uu sheegay M/weyne Shariif in uu ku jiro dhismaha ciidan amni oo xoogan, hannanna kara amniga dalka.
M/weyne Shariif waxaa uu sheegay in dawladiisu ay sugi doonto amniga dhammaandka bisha Janaayo sidii hore uu u sheegay R/wasaare Sharma’arke. Mar la weydiiyey in uu jiro jadwal uu degan oo ay ku sugi doonaan amniga ayaa uu kaga jawaabay in aanu sheegi karin.
Waxaa uu ka hadlay joogitaanka ciidamo shisheeye ee taageero ciidan, dhaqaale iyo hubba siiya xoogaga Al-shabaab iyo Xisbul Islam ee badi ka arrimiya gobollada Koonfureed ee Soamliya.
Waxaa uu intaas ku daray in dawladiisu aanay taageero sidaa u buuran ka helin bulshada caalamka, ayna adaga tahay in ay keligood sugaan amniga dalka.
Al-Qaacida ayaa uu sheegay in ay halis ku tahay Somaliya, Geeska Afrika iyo caalamka intiisa kaleba.
Mar wax laga weydiiyey dib u heshiisiinta mucaaradka dawladiisa ayaa uu sheegay in ay dadaalo badan sameeyeen, ayna jiraan qaar ka mid ah mucaaradka oo dawladiisu ku soo biiray.
M/weyne Shariif ayaa u wararmay Saraha Childress ee wargaysta maalinlaha ah ee Wall Street Journal.